अन्तरीक्ष यान निर्माता स्पेस एक्सका प्रमुख एलन मस्क प्रविधिको क्षेत्रमा भविष्यद्रष्टा मानिन्छन्। उनी वैज्ञानिक आविष्कारको दुनियाँमा नयाँनयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरिरहन्छन्। उनको यस्ता योजना व्यापारिक उद्देश्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ।
अष्ट्रेलियाको एडिलेडमा जारी इन्टरनेसनल एस्ट्रोनटिकल कंग्रेस (आइएसी) मा बोल्दै मस्कले यस्तो बताएका हुन्। स्पेस एक्सले युट्युबमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा लण्डनदेखि न्युयोर्कसम्मको यात्रा २९ मिनेटमा हुने बताइएको छ।
उनले कंग्रेसमा दर्शकहरुमाझ मंगलग्रह पठाउने यानको निर्माण अर्को वर्षदेखि सुरु गर्ने पनि बताए।
मस्कले स्पेस एक्सले बिएफआर नामक यानको निर्माणमा ध्यान दिने बताए। स्पेस एक्सले बिएफआर अर्थात् 'बिग फाल्कन रकेट' निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेको उनले बताए। कम्पनीभित्र यसलाई ‘बिग फकिङ रकेट’ पनि भन्ने गरिएको खुलासा उनले गरे। बिएफआरले स्पेसएक्सले अहिले गरिरहेका सम्पूर्ण काम गर्ने र अर्को ग्रहसम्मको यात्रा पनि तय गर्ने उनको दाबी छ।
मस्कले पहिलो पटक अघिल्लो वर्षको आइएसीमा मंगलग्रहमा यान पठाउने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका थिए। यसपटक उनले यसबारे केही हदसम्म विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले भनेको बिएफआर मात्र १०६ मिटर उचाइ तथा ९ मिटर चौडाइको यान हुनेछ। उनले सम्पूर्ण कम्पनीको शक्ति यही एक प्रणालीमा लगाउने बताएका छन्। बिएफआरले अहिलेका अन्तरीक्ष यानभन्दा धेरै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न सक्नेछ।
यसको अर्थ बिएफआरले स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने, स्पेस स्टेसनको मर्मत गर्ने कामबाहेक चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा समेत मानिसलाई पठाउने छ। त्यस्तै पृथ्वीभित्रै पनि निश्चत ठाउँबाट अर्को निश्चित ठाउँसम्म मानिसलाई पनि पुर्‍याउने उनले बताएका छन्।
पृथ्वीभित्र यस्तो यानले २७ हजार किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले यात्रा गर्नेछ। यद्यपि मंगल अभियानको जस्तो विस्तृत विवरण पृथ्वीभित्रको यात्राबारे उनले दिएनन्।
उनको नेतृत्वमा स्पेस एक्सका १६ ओटा अन्तरीक्ष यान सफलतापूर्वक पृथ्वीमा अवतरण गरिसकेका छन्। त्यसमध्ये दुई ओटा त दोस्रो पटक फेरि प्रक्षेपण गरिएका छन्।
टेस्ला तथा स्पेस एक्स सिइओ एलन मस्क
उनी अन्तरीक्ष यानको पुनःप्रयोगमा जोड दिने गर्छन्। यस्ता यान एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने हुनाले अन्तरीक्ष गतिविधि यति महंगो भएको उनको भनाइ छ। कुनै समय अन्य हवाइजहाजजस्तै यसलाई पनि पुनःप्रयोग गर्न सकिने उनको दाबी छ।
स्पेस एक्सको फाल्कन ९ यानलाई आंशिक रुपमा पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ। तर उनको योजनामा रहेको बिएफआर भने पूर्णतयाः पुनःप्रयोग गर्न सकिने हुनेछ।
‘स्पेस एक्सका एलन मस्क यस्तै छन्, उनी यस्तै गर्छन्,’ मेलबर्नस्थित स्विनबर्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आलन डफीको भनाइ बिबिसीले उधृत गरेको छ, ‘उनीहरुसँग ठूलो भिजन छ र उनीहरु त्यसतर्फ काम गर्छन्। तर उनीहरु जहिल्यै दिमागमा नाफा राखेर मात्रै कदम चाल्छन्। यदि त्यहाँ उनीहरुले नाफा देखे भने ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ, त्यो व्यवसाय सफल भयो।’ एजेन्सी
प्रकाशित १ कार्त्तिक २0७४ , बुधबार | 2017-10-18 09:27:50
मुना परियोजनासँग काठमाडौं विश्वविद्यालय
काठमाडौं । गैरआवासीय आवासीय नेपाली संघद्दारा सञ्चालित मुना परियोजनासंग काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसुम) ले सहकार्य
दराजको तयारी नेपालको सबैभन्दा ठूलो
संसार कै सबैभन्दा ठूलो सेल, अलिबाबा को ११.११ सेल नजिकिदै छ । पहिले चीनमा मात्र सिमित उक्त सेल अहिले संसार भरि एउटा मनोरन्जनात्मक सेल डे
‘फेसएप’को मजा कत्तिको घातक ?
अभिषेक सापकोटा / सामाजिक सञ्जाल आजभोलि सबैको दिनचर्या बनेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, इन्साट्राग्राम प्रविधिका अभिन्न अंग बनेका छन् । तिनै
बन्द हुने पालो ‘टिक टक’ को
एजेन्सी/इन्टरनेट प्रविधिको विकासले सूचना आदान–प्रदानमा निकै सहज भएको छ । अहिले विश्व एउटा गाँउमा रुपान्तरित भएको छ । यो प्रविधि विकासको
सकारात्मक सोचको प्रभाव सम्बन्धित
यो प्रयोगमा तीन वटा प्लास्टिकका टिफिन बक्समा पाकेको भात राखियो । वैज्ञानिकले सधैँ ती भातको बक्स अनुगमन गर्न प्रयोगशाला जान्थे I सो
फेसबुकले दुःख दियो के गर्ने ?
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले जति तपाईलाई सन्देश आदानप्रदान गर्न सजिलो बनाएको छ, कहिलेकाही यसले दुःख पनि त्यतिकै दिन्छ । त्यो कुरा फेसबुक